I-Visa yase-Ivory Coast Visa | ICote Divoire eVisa | natvisa.com
Cote Divoire Visa Isicelo se-Intanethi
Urhulumente we-Ivory Coast wazise nge-eVisa yokungena kwamanani ukwenza lula abantu abaya eIvory Coast. Inkonzo ivumela abantu ukuba bafake izicelo kwi-Intanethi kwaye bathathe uxwebhu kwisikhululo seenqwelomoya sasePort Bouet e-Abidjan. Bayacelwa abantu ukuba bagcwalise iinkcukacha zabo ezisisiseko ezibandakanya iphepha lesazisi, incwadi yokubekisa itikiti lendiza, ileta yesimemo, okanye isatifikethi sendawo yokuhlala. Emva kokwenza intlawulo, baya kuhlaziywa malunga nenqanaba labo lokuvunywa nge-imeyile. I-eVisa ye-Ivory Coast yeyokungena okuninzi kwaye ivumela ukuhlala kweentsuku ezingama-30 ubuninzi.
Iindidi zeCote Divoire Visa
I-Visa ye-Elektroniki Imeyli Iinyanga ze-3 Ukuya kwi-3 yeenyanga multiple Faka isicelo ngoku
Fika eCote Divoire
Abatyeleli abaceba ukutyelela i-Ivory Coast kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo xa besenza isicelo se-eVisa kweli lizwe. La maxwebhu, a IFomu yesiBhengezo sokuHamba, i Ikopi yabo yokundwendwela kunye a itikiti lokubuya. Ukusilela ukubonelela ngala maxwebhu kunokukhokelela ekungavunyelweni kwesicelo se-Visa kuIvory Coast.
Abafakizicelo kufuneka babe ne-Id ye-imeyile efanelekileyo. Kuya kufuneka banikeze le-ID ye-imeyile ngelixa besenza isicelo se-eVisa. Nasiphi na isaziso esimalunga nokungqinisisa okanye ukwala isicelo se-Visa ziya kuthunyelwa kule imeyile. Ke ngoko, abafaki-zicelo kufuneka babonelele nge-imeyile eyisebenzayo efikelelekayo kubo.
Enye yezona mfuno zibalulekileyo zokufumana i-eVisa ukuya eIvory Coast yipasipoti esemthethweni. Xa usenza isicelo se-eVisa, ipaspoti kufuneka isebenze kangangesithuba seenyanga ezi-6. I-eVisa yaseIvory Coast iza kubonelela abahambi ngeendlela ezininzi zokungena. Le Visa iza kuvumela iindwendwe ukuba zihlale eIvory Coast kangangeentsuku ezingama-90 emva kokuba zifikile.
Kukho inani leendawo umntu anokuhlala kuzo, eIvory Coast. Ukufumana i-Visa ukuya kumhlaba wesizwe wase-Ivory Coast, kufuneka ubungqina bendawo yokuhlala buzisiwe. Obu bungqina bunokuba yihotele ebhalisiweyo, indawo yokuhlala, i-motel okanye naluphi na olunye ulungiselelo lwendawo yokuhlala oluhlala kuyo, ngexesha lokuhlala kwabo elizweni.
Ukufumana kwakhona intlawulo yeVisa
Abahambi, xa befika kwisikhululo seenqwelomoya i-Abidjan, kufuneka baveze irisithi yasekuqaleni yokuhlawula umrhumo we-visa ababehlawule ngayo. Umrhumo we-visa yi-73 Euro, ekwabandakanya iintlawulo zebhanki.
Abatyeleli bayacelwa ukuba baveze incwadi yokundwendwela esemthethweni kwigosa lezothutho kwisikhululo seenqwelomoya i-Ivory Coast. Ipasipoti kufuneka ibe isemthethweni kangangexesha leenyanga ezi-6.
Nje ukuba abenzi-zicelo bafake izicelo kwi-Visa yabo kwi-visa kwaye benze intlawulo, bayakufumana isiqinisekiso esivela kwi-DST (yeSebe lokujonga izinto kwelizwe) besazisa ngokuvunywa okanye ukwaliwa kwesicelo. Ukuba isicelo sivunyiwe, abafaki-zicelo kufuneka banike imvume, ngokufika kwabo kwilizwe.
ISatifikethi seHlabathi seTyhefu yokuTywala i-Yellow Fever
Isatifiketi sokugonyelwa i-Yellow Fever siyadingeka kwabo bafaka izicelo ngaphambi kokuba bafike kwi-Ivory Coast. Nje ukuba bafike kwisikhululo seenqwelomoya, kufuneka basinike esi siqinisekiso kwabaphetheyo.
Iinkcukacha zeVisa yoNxweme yaseIvory
Yintoni i-evisa Coast ye-Ivory?
Ilizwe ngalinye linemithetho ethile kunye nemigaqo ebekiweyo xa kufikwa ekuvumeleni iindwendwe kwilizwe labo. Iindwendwe kufuneka zibonelele nge-visa okanye uxwebhu lokugunyazisa ukuhamba. Ngo-2017, i-Ivory Coast yasungula inkqubo ye-elektroniki yokufumana uxwebhu lwe-visa. Ngokwaziswa kwe-eVisa, abenzi-sicelo kwihlabathi liphela banokufaka isicelo kuyo naphi na. Inzuzo enkulu yendlela yokusebenza ye-Intanethi kukuba igcina ixesha kunye nemali.
Ungasifaka njani isicelo se-Intanethi seVisa yoNxweme yaseIvory?
Ukufaka isicelo se-eVisa kwiIvory kulula kakhulu, kulula kwaye kunokugqitywa ngamanyathelo ama-3 alula:
Gcwalisa uXwebhu lweSibhengezo sokuHamba ukuze ubhalise kwangoko: Inyathelo lokuqala xa ufaka isicelo se-visa yeIvory Coast kukugcwalisa ifomu lesibhengezo sohambo kunye nokubhalisa kwangaphambili. Ukwenza oku, abafaki-zicelo kufuneka bafake amaxwebhu amathathu afana nephepha lesazisi kwipasipoti yabo, ubungqina bendawo yokuhlala (ileta yesimemo okanye isatifikethi), kunye netikiti lendiza eliqinisekisiweyo. Emva kobhaliso lwangaphambi kokubhaliswa, abafaki zicelo kufuneka bahlawule umrhumo we-visa, eyi-73 Euro.
Fumana isiqinisekiso kwi-DST: Nje ukuba kwenziwe intlawulo, abafaki-zicelo baya kufumana i-imeyile enesiqinisekiso sentlawulo. Esi satifikethi siya kuba nekhowudi eyahlukileyo kunye neyakho buqu eqhotyoshelwe kuso. Kwisithuba seeyure ezingama-48 zeshishini, abafaki-zicelo bazakufumana impendulo kwi-DST (kwiSebe lokuJongwa kweMimandla echaza imeko yesicelo.
Yifumana i-eVisa: Ukuba isicelo somfaki-sicelo sobhaliso sele sivunyiwe, kuya kufuneka bathabathe olu xwebhu kwindawo yeVisa kwisikhululo senqwelomoya kwaye balunikezele kwigosa elilapho. Apha, abafaki-zicelo kufuneka benze ubhaliso lwebhayometri yabo, kwangoko emva koko iya kuprintwa ithunyelwe iVV.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-eVisa ukuya eIvory Coast
Lonke ulwazi olunikiweyo ngelixa ugcwalisa le fomu kufuneka lungqinelane neenkcukacha eziprintiweyo kwipaspoti. Ukuba ulwazi aludibani, ngoko kunokwenzeka ukuba isicelo se-visa singalahlwa.
Abatyeleli kufuneka bagcwalise ubhengezo lohambo lokubhaliswa kwangaphambili, lonke ixesha baya eIvory Coast.
I-eVisa eya kufunyanwa kwi Isikhululo senqwelomoya e-Abidjan Kuphela
Nje ukuba isicelo se-visa samkelwe, abahambi banokuthatha ii-visa zabo kuphela kwisikhululo seenqwelomoya sasePort Bouet e-Abidjan. I-Visa ayiyi kuvunyelwa nakwezinye izibuko; ke ngoko abahambi kufuneka babhukishe amatikiti abo ngokufanelekileyo. Ukufika kwabo, abafaki-zicelo kukwafuneka baveze isatifiketi sokugonywa kwi-Yellow Fever.
Yintoni iVisa abakhenkethi baseIvory Coast?
I-Ivory Coast isungule inkqubo ye-intanethi evumele iindwendwe ezinomdla ezivela kwihlabathi liphela ukuba zifake izicelo kwi-intanethi kwi-visa. Ifom yesicelo inokugcwaliswa kwi-Intanethi nakweyiphi na indawo.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseIvory Coast?
Yakuba ivunyiwe imvume, isebenza ixesha elithile leentsuku ezingama-90 ekungeneni kwakho. Iindwendwe zinoxanduva lokungagqithisi eIvory Coast.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo, ukufaka isicelo se-eVisa yaseIvory Coast?
Kuya kufuneka ungenise la maxwebhu alandelayo ngesicelo sakho se-Visa-ikopi yeenkcukacha zakho, incwadana yokundwendwela, ubungqina bendawo yokundwendwela, ifomu yokubhengeza uhambo kunye neenkcukacha zesicwangciso sokuhamba.
Ngaba kufuneka ndenze naluphi na uxwebhu xa ndifika eIvory Coast?
Ewe, ekufikeni kwabo eIvory Coast, iindwendwe ziyacelwa ukuba zingenise la maxwebhu alandelayo- ukufunyanwa komrhumo we-visa, incwadi yokundwendwela esemthethweni, ukuvunywa kwe-DST (iSebe lokujonga ngokuHlola umhlaba) kunye nesatifiketi sokugonyelwa i-Yellow Fever.
Ngaba kufuneka ndigcwalise ifom yokuvuma ukuhamba ngalo lonke ixesha ndindwendwela eIvory Coast?
Ewe, abahambi bayacelwa ukuba babhalise ngaphambi kokugcwalisa iphetshana lesibhengezo sohambo, ngalo lonke ixesha bendwendwela ilizwe.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe yi-eVisa enye ye-Ivory Coast?
I-eVisa evumelekileyo yase-Ivory Coast ivumela ukungena kwamangenelo amaninzi. Oku kuthetha ukuba umenzi-sicelo unokundwendwela amaxesha amaninzi eIvory Coast enikwe i-visa ayinikiweyo.
Yeyiphi imeko ekufanele ukuba ipasipoti yam ihlangane ukuze ifake isicelo se-eVisa kwiIvory Coast?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa kwiIvory Coast, qinisekisa ukuba unayo ipasipoti esemthethweni ixesha elingangeenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-eVisa wase-Ivory Coast?
Emva kokuba isicelo sigqityiwe, abafaki-zicelo bayakufumana impendulo evela kwi-DST malunga nemeko yeVisa kwi-Id yabo ye-imeyile.
Ndiza kuyifumana njani visa yam, nje ukuba isicelo sam samkelwe kwaye sigqityiwe?
Abafakizicelo baya kufumana imvume yokubhaliswa kwangaphambili kwii-imeyile zabo ze-imeyile. Kuya kufuneka bathathe isatifikethi sokuhlawula kunye nencwadi evunyiweyo yokufika kwelinye ilizwe, apho iphepha-mvume livunyelwe.